Siduu caalamku uga jawabay tallabada uu Trump Quddus u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa’iil
Madaxda wadamada caalamka aya siyaabo kala duwan uga hadlay tallabadii xalay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump isagoo ku sugan aqalka cad ee dalkasi looga arrimiyo uu ku shaaciyay in magaalada Quddus uu u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa’iil.
Go’aankan ayaa lagu tilmaamamy inuu yahay mid meesha ka saarayo hannankii siyaasadeed ee Maraykanka horay looga bartay.
Madaxweyne Trump ayaa sido kale ku dhawaaqay in safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay magaalada Tel Aviv ee Israa’iil loo rari doono Quddus.
Go’aankaasi ayaa waxaa ka dhashay in Falastiiniyiinta ku nool koofurta marinka Qaza ay gubeen sawirka Mr Trump, kan ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu iyo calanka Yuhuudda.
Ka hor inta uusan go’aankan ku dhawaaqin waxaa uu shaaciyay in tallaabadan ay ahayd mid la doonayay inay goor hore dhacdo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa canbareeyay tallabadaasi isagoo sheegay in arrintaasi uu Maraykanka ku dhaqaaqay ay Muslimiinta ug dhigan tahay khad cas .
Wax aa uu ku baaqay kulan xubnaha hay’ada iskaashiga islaamka ee magaceedu loo soo gaabiyo OIC ay ku yeelanayaan magaalada Istanbul.
Dibadbaxayaal ayaa isugu tagay banaanka hore ee safaarada Mareykanku ku leeyahay magaalada Istanbuul.
Wasiirka arrimaha dibada ee Turkiga Mevlut Cavusoglu aya dhankiisa sheegay inay canbareynayaan ku dhawaaqidda muujinaysa mas’uuliyad darro.
Mr. Cavusoglu ayaa sheegay in arrinta Quddus si weyn looga wadahadli doonto kulanka 13-ka bishan ka dhacay magaalada Istanbul ee Turkiga oo ay yeelanayaan hogaamiyaaha iskaashiga ismaamulka ee OIC iyo golaha wasiirada arrimaha dibada ee dalalka kala duwan.
Benjamin Netanyahu, ra’iisul wasaaraha Israa’iil ayaa dhankiisa ku tilmaamay go’aan taariikhi ah oo caadil ah.
Ururka Xamaas aya afhayeen u hadlay waxaa uu sheegay in sida uu hadalka u dhigay albaabadii cadaabta ay furmeen.
Hogaamiyaha ugu sareeya ee dalka Emmanuel Macron ayaa dhankiisa sheegay inuusan tageersanayn go’aanka Trump oo uu ku tilmaamay mid lid ku ah shuruucda caalamiga ah oo uu ka dhawajiyay inuu yahay mid shaalayto mudan.
Ra’iisul wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa dhamaan muslimiinta meel kasta oo ay dunida ka jogaan ugu baaqay inay ka soo horjeestaan talaabada xalay uu madaxweynaha Maraykanka Quddus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa’iil.
Dowladda Paksitan ayaa arrin laga shaalayo ku tilmaantay in Donald Trump uu iska dhaga tiray baaqyadii caalamka oo dhan uga yimid.
Dowladaha Shiinaha iyo Ruushka ayaa wallaac ka muujiyay arrintan iyagoo ka digay in xiisadda ay cirka isku sii shareerto.
Theresa May, Ra’iisalwasaaraha UK ayaa dhankeeda sheegtay inay Trump arrintan kala hadli doonto.
Midowga Yurub ee EU-da iyo ururka Jaamacadda Carabta ayaa dhankooda walaac ka muujiyay saameynta uu yeelan karo go’aanka Trump.
Wasiirka Sirdoonka Israa’iil Israel Katz ayaa horay u sheegay inay isu diyaarinayaa wax kasta sida in ay rabshado dhacaan.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterras, ayaa sheegay in aysan jirin wax lagu beddelo xal u raadinta Israa’il iyo Falastiin, waxa uuna ku tilmaamay mowqifka Mareykanku mid laga murugoodo.
Tallaabada Trump ayaa maraykanka ka dhigeysa dalkii ugu horreeyay dunida ee si rasmi ah Quddus u aqoonsado inay tahay caasimadda Israa’il.
Saraakiisha Aqalka Cad ayaa dhankooda sheegeen in go’aanka Madaxweyne Trump uu yahay Ictiraaf waaqica haatan jira iyo taariikhdaba balse ma ahan bayaan siyaasadeed oo rasmi ah.
Wasiirka arrimaha dibada ee Qadar Sheekh Maxammad bin Cabdurraxman Al-Sani ayaa go’aan ku tilmaamay xukun dil ah oo nabada lagu fuliyay.
Ra’iisul wasaaraha Lubnaan Sacad Al-Xariri ayaa sheegay inay garab taaganyihiin shacabka Falastiin oo ay go’aanka Maraykanka ka soo horjedaan.
Madaxweynaha Lubnaan Michel coon ayaa dhankiisa sheegay in tallabada ay xasilooni darro keeneyso sidaas awgeedna dalalka carbeed laga doonayo inay ka midobaan.
Wasaarada arrimaha dibada ee Masar ayaa dhankeeda bayaan ay soo saartay ku sheegay in go’anka Maraykanka uusan wax ka bedelynin maqaamka Quddus.
Afhayeenka dowlada Jordan Maxammad al-Momani ayaa dhankiisa sheegay in ka dowlad ahaan ay ka soo horjedaan go’aanka Quddus loogu aqoonsaday inay tahay caasimada Israa’iil.
Wasaarada arrimaha dibada ee Baxrayn ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in go’aanka Trump uu wax u dhimayo geedisocodka nabadeed ee bariga dhexe sido kalena uu ku xadgudbayo shuruucda caalamiga ah.
Wasaarada arrimaha dibada ee Algeria ayaa sheegtay in Maraykanka uu ku dhaqaaqay tallabo khatarteeda leh.
Madaxweynaha indonesian Joko Widodo ayaa tallabadasi si kulul u canbareeyay isagoo Maraykanka ugu baaqay inuu ka laabto.
Waxaa uu sheegay inay tahay mid gilgileyso nabadgelyada iyo xasiloonida caalamka.
Waxaa sido kale go’aanka Trump canbareeyay wadamada Tunisia, Kuwait, Sacuudi carabiya,
← Mucaaradka Nasa oo weli ku adkeysanaya in Raila la dhaarinayo
Machadka hormarinta manaahijta oo sheegay inaan lagu fududaan doonin manhajka cusub ee tacliinta →